ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောဖရဲသီးအစားအစာ: ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၄ ရက်များအတွက်မီနူး | တရားဝင် site KETO Complete
နွေရာသီဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မွှေးကြိုင်သောဖရဲသီး၏အရည်ရွှမ်းသောအကကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စတင်စားသောက်ကြသည်။ဤဖရဲသီးယဉ်ကျေးမှု၏အသီးများ၏အရသာသည်ထူးခြားသည်၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုယူဆောင်လာသည်။အထူးသဖြင့်ဖရဲသီးသည်လူတစ် ဦး ကိုအချိန်တိုအတွင်းအ ၀ လွန်ခြင်းမှသက်သာစေသည်။သူဘယ်လိုအတိအကျလုပ်သလဲ။ဖရဲသီးမှာကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ။ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်ဤမေးခွန်းများအတွက်ပြည့်စုံသောအဖြေကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောဖရဲသီးစားခြင်းသည်လူသားတို့၏တရားမျှတသောတစ်ဝက်တွင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
သူတို့အများကြီးရှိတယ်။ပထမဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာအပင်ထွက်ထုတ်ကုန်၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းသည်။အချိုဖတ် ၁၀၀ ဂရမ်တွင် ၂၇ kcal သာပါရှိသည်။ထို့ကြောင့်သင်မည်မျှစားသည်ဖြစ်စေ၊ လက်ရှိမုန်းတီးသောကီလိုများကိုသင်တိုးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဖရဲသီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပိုလျှံတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ကအဆုတ်ထက်ပိုလွယ်တယ်။၎င်းသည်သန္ဓေသား၏အတွင်းဆုံးနီမြန်းသောအစိတ်အပိုင်းတွင်စွဲမက်ဖွယ်အရည်ပမာဏရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အာမခံချက်အရလတ်ဆတ်တဲ့ဖရဲသီးပျော့ဖတ်ဟာရေဓာတ် ၉၃% ရှိပါတယ်။ဤအချက်သည်ဖရဲသီး၏ diuretic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှရေဓာတ်များကိုအဆီဖုံးလွှမ်းထားသောအသွင်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ဧရာမဘယ်ရီသီး၏အပျော့ဖတ်နှင့်အမျှင်ဓါတ်တို့ပါ ၀ င်သည်။သူတို့ထဲကအနည်းငယ်ရှိပါစေ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့က "plus-plus" အတွက်သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်ဆောင်ကြတယ်၊ သူတို့ကအူလမ်းကြောင်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေတယ်၊ အဆိပ်တွေ၊ အဆိပ်တွေအပြင်ပိုလျှံတဲ့အဆီတွေနဲ့ "မကောင်းတဲ့" ကိုလက်စထရောတွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်။အပင်အတွက်အမျှင်ဓာတ်အပြင်ဖရဲသီးဖျော်ရည်သည်အသည်းကိုအကျိုးပြုသက်ရောက်မှုရှိသောအဆိပ်နှင့် ballast ဓာတ်များကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသန့်စင်ပေးသည်။
ဖရဲသီး၏အချိုဖတ်၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာဖွဲ့စည်းမှု၌အဆီလုံးဝနီးပါးမရှိခြင်းဖြစ်သည်။မှန်ပါသည်၊ ၎င်းတွင်လုံလောက်သောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အလွယ်တကူအစာကြေလွယ်သောဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပြီး adipose တစ်သျှူးဆဲလ်များအဖြစ်မပြောင်းလဲပါ။သို့သော်လည်း၊ ထုတ်ကုန်၏ glycemic အညွှန်းကိန်းမြင့်မားခြင်း (ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၇၀ ကျော်) ကိုသင်အလွန်အကျွံမှီခိုမနေသင့်ပါ။ဖရဲသီးစားသုံးခြင်းနှင့်အဆိုပြုထားသောအစားအစာများ၏စည်းမျဉ်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့နောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခဲယဉ်းသောအသားများကိုစုပ်ယူခြင်းသည်သင်၏ပုံကိုသာအကျိုးပြုလိမ့်မည်။
ဖရဲသီးပျော့ဖတ်ကို အသုံးပြု၍ အခြေခံသောအာဟာရစနစ်သည်သိသာထင်ရှားသည့်အားသာချက်များစွာရှိသည်။၎င်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
အချိန်ကုန်သက်သာစေသည် (အပင်ထွက်ပစ္စည်းများသည်လတ်ဆတ်မှုကိုစုပ်ယူသည်၊ ထို့ကြောင့်အသီးကိုပဏာမအပူပေးခြင်းမလိုအပ်ပါ)
ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် detoxifying အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပံ့ပိုးပေး;
ဖရဲသီးပျော့ဖတ်တွင်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတက်ကြွစေသောအရာများ (ဗီတာမင် C, E, K, အုပ်စု B, carotenoids) တို့ကြွယ်ဝစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်ဗီတာမင်မျိုးစုံကိုဗီတာမင်ဘီစားသုံးရန်မလိုအပ်ပါ။
ဆိုးရွားသောဆန့်ကျင်ဘက်အချက်များစာရင်း (ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ဖောလာခြင်း၊ ပန်ကရိယရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ၊ ကိုယ်ဝန်နောက်ကျခြင်း)
အစင်းဘယ်ရီသီး၏အသားကိုသီးသန့်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားသုံးသည်။အချဉ်နှင့်ဆားထုတ်ကုန်သည်ဤနွေရာသီ-ဆောင်း ဦး ရာသီအစားအစာအတွက်မသင့်တော်ပါ၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှပိုလျှံသောအရည်များထုတ်ခြင်းကိုတားဆီး။ ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်သျှူးများ၌ချည်နှောင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ချနည်းအတွက်အကောင်းဆုံးမှာ ၅-၈ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောတောက်ပသောအခွံနှင့်တောက်ပသောဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအသီးဖြစ်သည်။ဘယ်ရီသီး၏မျက်နှာပြင်ကိုတို့ထိသောအခါမှိုင်းညို့သောအသံကိုကြားရပါမည်။
ဖရဲသီးစားသုံးခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးကာလသည် ၅ ရက်၊ အနည်းဆုံးနှစ်ရက်၊ အများဆုံး ၂ ပတ်ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့လျှင်သင်တတ်နိုင်သမျှမကြာခဏစားရန်လိုအပ်သည်၊ အကောင်းဆုံးမှာ ၅-၆ ကြိမ်ဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့်တစ်နေ့ကိုသုံးနပ်ပါဝင်တဲ့အစားအသောက်ပုံစံတွေရှိတယ်။
သင်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးဖရဲသီးအချို ၂၀၀ ဂရမ်စားရန်လိုသည်။အကောင်းဆုံးကတော့ဒီအပင်ထွက်ပစ္စည်းပမာဏကိုကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁ ကီလိုဂရမ်နှုန်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။
ဖရဲသီးအသုံးပြုခြင်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ ကောက်နှံများ၊ တိရိစ္ဆာန်မှရရှိသောပရိုတိန်းခဲဖွယ်အစရှိသောအစားအစာထုတ်ကုန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဖရဲသီးနှင့်ဘူးသီးများ၏ diuretic အာနိသင်ကြောင့်အိပ်ရာမ ၀ င်မီအနည်းဆုံးသုံးနာရီအလိုတွင်စားသင့်သည်။သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ဖရဲသီးပျော့ဖတ်ကိုအလွန်အကျွံမှီခိုမနေပါနှင့်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောနည်းလမ်းကို သုံး၍ ဆုံးရှုံးထားသောမုန်းတီးသည့်ကီလိုဂရမ်များပြန်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းအားမီနူးရှိပုံမှန်ဟင်းလျာများအပါအ ၀ င်အစားအစာမှနည်းမှန်လမ်းမှန်ထွက်ရန်လိုအပ်သည်။
အစားအစာစနစ်၏အလေ့အကျင့်တွင်မည်သည့်ပုံစံမဆိုခွန်အားဖြစ်စေသောသကြားနှင့်ဆား၊ အကြော်နှင့်အဆီများသောအရသာများ၊ အသားများ၊ တစ်ပိုင်းပြီးစီးသောထုတ်ကုန်များ၊ အမြန်အစားအစာ၊ ဝက်အူချောင်းနှင့်ခေါက်ဆွဲ၊ ကစီဓာတ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ကစီဓာတ်ပါသောအသီးများ တားမြစ်သည်။ဤစာရင်းတွင်ကော်ဖီလည်းပါ ၀ င်သည်။
ဖရဲသီးကို ၂ ရက်စာစားပါ
ဤရွေးချယ်မှုအရဖရဲသီးပျော့ဖတ်ပမာဏကိုအညီအလေးချိန်နှင့်အညီတွက်ချက်။ ၄-၅ ဧည့်ခံပွဲများတွင်စားသုံးသည်။ထို့ပြင်သင်မချိုသောလက်ဖက်စိမ်း (သို့) ရိုးရိုးရေ ၁. ၅ လီတာအထိနေ့စဉ်သောက်သင့်သည်။၎င်းသည်အလွန်တောင့်တင်းသောပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်နှစ်ရက်ထက်ပိုမထိုင်နိုင်ပါ။ဤနည်းလမ်းကြောင့်သင်နေ့စဉ်ပိုနေသောအလေးချိန် ၁-၁. ၃ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
ဖရဲသီးကို ၃ ရက်စာစားပါ
၎င်းသည်ယခင်ပုံစံထက်များစွာကွဲပြားသောမီနူးအဖြစ်ငါးကြိမ်အစာငတ်ခံကျေနပ်စေသောနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။မလိုအပ်သောကယ်လိုရီ ၂. ၅-၃ ကီလိုဂရမ်ကိုနုတ်ခြင်းဖြင့်သင်အလွန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
နံနက်၌သူတို့သည်ရေ၌ပြုတ်ထားသော oatmeal နှင့်ဖရဲသီးပျော့ဖတ် (၃၀၀ ဂရမ်ခန့်) ကိုစားကြသည်။
နေ့လည်စာအတွက်၊ သခွားသီးသုပ်တစ်စိတ်နှင့်ခုတ်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ပြုတ်ထားသောကြက်သား ၁၀၀ ဂရမ်ကိုစားပါ။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းတို့ကိုဖရဲသီးပျော့ဖတ် ၃၀၀ ဂရမ်ဖြင့်အားဖြည့်ပေးသည်။
ညစာအတွက်သူတို့ကအချဉ်မုန့်နဲ့အိမ်သုံးဒိန်ခဲ ၁၀၀ ဂရမ် (ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးမှာအဆီရာခိုင်နှုန်းနည်းရမယ်)၊ သူတို့ကသစ်တော်သီး ၁ လုံးစားတယ်။
နံနက်စာသည် persimmon၊ ဖရဲသီးအဖတ်၊ ပန်းသီးနှင့်ကောက်ညှင်းစေ့များပါ ၀ င်သောအသီးသုပ်ဖြစ်သည်။ဤအရောကိုသဘာဝအချိုမပါသောဒိန်ချဉ်နှင့် တွဲ၍ စားနိုင်သည်။
နေ့လည်စာသည်ဖရဲသီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (၃၀၀ ဂရမ်ထက်မပိုပါ) ။
နေ့လည်စာအတွက်သူတို့ကခုတ်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ကောက်ပေါင်မုန့် ၂-၃ ချပ်နဲ့အိမ်သုံးဒိန်ခဲတစ်ပိုင်းကိုစားသုံးကြတယ်။
နေ့လယ်စာသရေစာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ကြက်ဥပြုတ် ၁ ဥကိုစားသည်။
ညနေပိုင်းတွင်၎င်းတို့အားဖရဲသီးပျော့ဖတ် (၀. ၄ ကီလိုဂရမ်ခန့်) အားဖြည့်ပေးသည်။
မနက်စာတွင်အဆီနည်းသောနွားနို့နှင့်ရေတစ်ဝက်ကိုကျိုထားသောစုပ်ယူမှုကြောင့် vivacity နှင့်ခွန်အားကိုရရှိသည်။
အဲဒီ့နောက်မှာတော့အစိမ်းရောင်ပန်းသီးတစ်လုံး - သရေစာတစ်လှည့်ရောက်လာတယ်။
နေ့လည်စာထမင်းစားချိန်၌စင်းဘယ်ရီသီး ၂၀၀ ဂရမ်ထက်မပိုသင့်ပါ။
ညစာစားပွဲတွင် ၁% အဆီ kefir ၁ ဖန်ခွက်ပါ ၀ င်သည်။
ဖရဲသီးကို ၅ ရက်စာစားပါ
ဤကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောအစီအစဉ်သည်သုံးရက်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောနည်းလမ်းကိုလုံးဝပြန်လုပ်သည်။၎င်းသည်အစားအစာ၏စတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမရက်များအတွက်၎င်းတို့သည်ဒုတိယနှင့်တတိယအတွက်ရည်ရွယ်သော menu ကိုအသီးသီး (ထိုအစီအစဉ်အတိုင်း) ယူသည်။ရလဒ်အနေနှင့်ကြေငြာချိန်အတွင်းပိုလျှံသောကိုယ်အလေးချိန် ၅ ကီလိုဂရမ်အထိကျသွားစေနိုင်သည်။စကားမစပ်၊ ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီရွေးချယ်မှုမှာအခြားနာမည်တစ်ခုရှိတယ် - "ဖရဲသီးအစားအစာ ၅ ကီလိုဂရမ်နုတ်ခြင်း"
ဖရဲသီးကို ၇ ရက်စာစားပါ
ဒါဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့လုံးဝအစာမငတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပိုလျှံတဲ့ပေါင်အနည်းငယ်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့တောင့်တနေတဲ့သူတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောစနစ်သည်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်တင်းကြပ်စွာစားရန်သတ်မှတ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာလူအများနှစ်သက်သောအဆာပြေစားစရာများလုံးဝမပါဘဲဖြစ်သည်။
နံနက်စာ - ထောပတ်မပါသောပြုတ်ထားသောဆန်၊ ကြက်ဥတစ်လုံးမှကြက်ဥတစ်လုံး၊ သကြားမပါသောလက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်
နေ့လည်စာ - မီးဖို၌ဖုတ်ထားသောအဆီနည်းငါး (၂၀၀ ဂရမ်) နှင့်သံလွင်ဆီတို့ဖြင့်နယ်ထားသောသင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်များသုပ်ပါ။
ညစာ - ဖရဲသီးပျော့ဖတ် (၀. ၃ ကီလိုဂရမ်ထက်မနည်း)
ဖရဲသီးကို ၁၀ ရက်စာစားပါ
ဖရဲသီးတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၏ဤပြောင်းလဲမှုသည်အတော်လေးနူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။၎င်းကိုလေ့ကျင့်ပါ၊ ၇-၈ ကီလိုဂရမ်ကိုနှုတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူသည်။
နံနက်၌သူတို့သည် oatmeal ကိုစားကြပြီးတို့ဟူးဒိန်ခဲ (၂-၃ ချပ်) ကိုခံစားကြသည်။
နေ့လည်စာအတွက်၎င်းတို့ကိုအသားမပါသောအသား (၂၅၀ ဂရမ်) နှင့်ပြည့်စေသည်၊ ဤပန်းကန်တွင်သခွားသီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်တို့ပါ ၀ င်သည်။နေကြာဆီကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောစပ်မှုအတွက်အဝတ်လျှော်အဖြစ်သုံးသည်။
ညနေစာ - ဖရဲသီးပျော့ဖတ် (၃၀၀-၄၀၀ ဂရမ်)
ဖရဲသီးကို ၂ ပတ်စာစားပါ
၎င်း၏ရလဒ်သည်အနုတ် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ဤအာနိသင်ရရှိစေရန်အစားအစာတွင်ပြုတ်ထားသောစွပ်ပြုတ်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည်။ကြက်သား၊ စီရီရယ်နှင့်လုံလောက်သောအချဉ်ဖောက်ထားသောနို့ထွက်ပစ္စည်းများနှစ်ပတ်ဖရဲသီးစားတဲ့နေ့တစ်နေ့အတွက်နမူနာ menu တစ်ခုရဲ့ပုံစံကဘာလဲ။
နံနက်ခင်း - buckwheat ကိုရေနှင့် ပေါင်း၍ ဖရဲသီးအချပ်အနည်းငယ်ကိုပြုတ်ပါ။
ဒုတိယအစားအစာသည်အစင်းသီး ၃၀၀ ဂရမ်ဖြစ်သည်။
နေ့လည်စာ - ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ငရုတ်ပွသုပ်၊ ကြက်ကြော် ၂ ခု
သရေစာ - ဖရဲသီး ၀. ၃ ကီလိုဂရမ်
ညနေခင်း - ဖွဲနုပေါင်မုန့် ၁ ချပ်၊ သဘာဝဒိန်ချဉ် ၁၅၀ (သို့) ဒိန်ချဉ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်
အိပ်ရာမ ၀ င်မီအဆီနည်းသောအချဉ်ရည်နို့တစ်ခွက်ကိုသောက်ခွင့်ပြုသည်။
ဤအစားအစာစနစ်အားလိုက်နာမှုအတွက်သက်တမ်းသည် ၃ ရက်ဖြစ်သည်။ဤအချိန်တိုအတွင်း ၃ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။နည်းစနစ်၏ဤထိရောက်မှုကို kefir နှင့်ဖရဲသီးတို့ကအတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အစာချေဖျက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ပိုလျှံသောအစိုဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားခြင်း၊ အသည်းနှင့်အူလမ်းကြောင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ဤအစားအစာကိုလိုက်နာနေစဉ်အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းသင်စားရန်လိုအပ်သည်။
တစ်နေ့လျှင် kefir ၁ လီတာသောက်ပါ။
အဆီနည်းစိမ်ထားသောနွားနို့ (၂၀၀ မီလီလီတာ) နှင့်ဖရဲသီးပျော့ဖတ် (၃၀၀ ဂရမ်) ကို ၃ နာရီခြား။ သုံးပါ။
ဤကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်၏ကြာချိန်သည် ၁၄ ရက်ဖြစ်သည်။၎င်းသည်ဖရဲသီး ၁ ကီလိုဂရမ်နှင့်လတ်ဆတ်သောသခွားသီးများကိုနေ့စဉ်စားရန်အကြံပြုသည်။အိပ်ရာမ ၀ င်မီ၎င်းသည် kefir ၂၅၀ မီလီလီတာကိုစားသောက်ခွင့်ပြုသည်။သင်တို့သည်လည်းသန့်ရှင်းသောစားပွဲတင်ရေကိုများများသောက်ရန်လိုအပ်သည်။တစ်နေ့တာအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မီနူးသည်ဤပုံပေါ်နိုင်သည်။
နံနက်စာ - သံပုရာနှင့်ဖရဲသီး (၁ ဖန်ခွက်) ညှစ်ထားသောအရည်များရောပြီး
ဒုတိယမနက်စာ - သခွားသီးအနည်းငယ်
ညစာစားပွဲတွင်ဖရဲသီးပျော့ဖတ် ၅၀၀ ဂရမ်နှင့်အစင်းဘယ်ရီသီးများမှရရှိသောဖျော်ရည် ၂၀၀ မီလီလီတာတို့ဖြင့်ကျေနပ်သည်။
နေ့လည်ခင်းသရေစာအတွက်သူတို့ကဖရဲသီးနဲ့သခွားသီး ၂-၃ လုံးသုပ်ထားတဲ့သဘာဝဒိန်ချဉ်နဲ့တွဲစားတယ်။
ညနေပိုင်းတွင်သခွားသီးအချပ်များနှင့်ဖြည့်စွက်ပြီး "Astrakhan" (၄၀၀ ဂရမ်) ၏အသားကိုတစ်ဖန်မြည်းစမ်းခွင့်ပြုပါ။
အစားအစာတစ်မျိုးတည်းတွင်မတူညီသောအစားအစာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ပတ်အတွင်းပိုလျှံကိုယ်အလေးချိန် ၄ ကီလိုဂရမ်ခန့်ကိုမေ့စေသည်။သို့ရာတွင်၎င်းတို့အားထမင်းတစ်နပ်တည်းတွင်သုံးရန်တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားသည်မဟုတ်လျှင်အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများနှင့်သင်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပေ။
မနက်စာတွင်အဆီနည်းသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၏အရသာမှာ ၂၀၀ ဂရမ်ဖြစ်သည်။
နေ့လည်စာစားချိန်၌ဖရဲသီး ၂ ချပ်ကိုစားသည်။
အိမ်သုံးဒိန်ခဲ (၁၅၀ ဂရမ်) သည်သရေစာအဖြစ်သုံးသည်။
၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းဖြင့်မုန်းတီးမှု ၆-၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်၊ ၎င်းကိုအမှန်တကယ်အထင်ကြီးသောအတိုင်းအတာရှိသောလူများကလေ့ကျင့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ဤနည်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်မီးဖို၌ယခင်ကအခြောက်ခံထားသောကောက်ပေါင်မုန့်အချပ်များစွာနှင့်အတူဖရဲသီးအသားဖတ်ကိုစားသုံးရန်လိုအပ်သည်။တစ်နေ့လျှင်ဤကဲ့သို့အစားအစာငါးမျိုးရှိသင့်သည်။စားသုံးမှုတစ်ခုအတွက်တွက်ချက်ထားသောဖရဲသီးပမာဏသည် ၅၀၀ ဂရမ်ထက်မပိုနိုင်ပါ။
ဖရဲသီးနှင့်ဖရဲသီးနှစ်ခုလုံးကိုညီတူညီမျှနှစ်သက်သူများသည်ဤအပင်အစားအစာနှစ်ခုလုံးတွင်ပါဝင်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့်အစီအစဉ်ကိုဧကန်အမှန်ရရှိလိမ့်မည်။ဒီအစားအစာ၏ကြာချိန်: ၉ ရက်။ဤကာလအတွင်းသင် ၆ ကီလိုဂရမ်အားဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးလာနိုင်သည်။
နံနက်ခင်းတွင်မီးဖို၌ဖုတ်ထားသောဖရဲသီးအနည်းငယ် (၂၀၀ ဂရမ်) နှင့်ချောကလက် glaze နှင့်အဆာမပါသောဒိန်ခဲတစ်လုံး
နေ့လည်စာအတွက်၎င်းတို့ကိုအလယ်အလတ်အဆီပါဝင်မှု (၁၅၀ ဂရမ်)၊ ငါးပြုတ်နှင့်ဒိန်ခဲအပိုင်းများနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်သောအသီးအရွက်များထည့်ပြီးဖရဲသီးတို့ဖြင့်ပြည့်စေသည်။
မုံ့ - ဖရဲသီးပျော့ဖတ် (၀. ၄ ကီလိုဂရမ်)
နောက်ဆုံးညစာသည်ဆန်လုံးညို (၁၅၀ ဂရမ်)၊ ဖရဲသီးနှစ်ချပ်နှင့်မုန်လာဥနီနှင့်ပန်းသီးသုပ်တို့ဖြစ်သည်။
မနက်စာအတွက်ဖရဲသီး ၁၅၀ ဂရမ်၊ ကြက်ဥ ၁ လုံးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးပြုတ်ပါ။၎င်းကိုအချိုမပါသောလက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖြင့်ဆေးပါ။
နေ့လယ်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့သည်ကစီဓာတ် (၁၀၀ ဂရမ်) နှင့်ဖရုံသီး ၀. ၄ ကီလိုဂရမ်နှင့်အနိမ့် ၀ င်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များစုပ်ယူမှုကြောင့်အားအင်ပြည့်စေသည်။ရိုးရိုးရေသည်သောက်ရေအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
နေ့လည်ခင်းသရေစာအတွက် 1% kefir တစ်ခွက်သောက်ပါ။
ညနေခင်း - ကြက်ပြုတ်အသား ၂-၃ ချပ်၊ ဆားမပါသောပေါင်မုန့် ၂ လုံး၊ ဖရဲသီးအနည်းငယ်
နံနက်စာကိုသဘာဝဒိန်ချဉ် (၁၅၀ မီလီလီတာ) နှင့်အစင်းဘယ်ရီသီးပျော့ဖတ် (၄၀၀ ဂရမ်)
နေ့လည်စာအတွက်ကြက်ကြော် (၁၀၀ ဂရမ်) ကိုသင့်ကိုယ်သင်စားခွင့်ပြုပါ။ဖရဲသီး ၀. ၄ ကီလိုဂရမ်နှင့်အရောင်ပြောင်းဆန်အချို့ (၁၅၀ ဂရမ်)
သူတို့၏ယူနီဖောင်းများတွင်အာလူးပြုတ်နှစ်စုံ၊ သခွားသီးသုပ် (၁၅၀ ဂရမ်) နှင့်ဖရဲသီးဖတ် (၄၀၀ ဂရမ်) တို့ဖြင့်ညစာစားပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောဖရဲသီးနည်းလမ်းနှင့်ပေါင်းပြီးထူးချွန်သောရလဒ်များရရှိသူတိုင်းသည်၎င်းတို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်စိတ်ဝင်စားသည်။ဤအတွက်၊ ပုံမှန်အစားအစာသို့မှန်ကန်သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပရိုတင်းထုတ်ကုန်များကို menu ထဲသို့မိတ်ဆက်ပေးပြီးအစင်းဘယ်ရီသီး၏အသားများကိုဆက်လက်စားသုံးသည်။ဖရဲသီး mono-diet ထိုင်သူများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။
နံနက် - ဖရဲသီး ၀. ၃ ကီလို
ဒုတိယနံနက်စာ - ကောက်ပေါင်မုန့် ၁ လုံး၊ သဘာဝဒိန်ချဉ် ၁ ဖန်ခွက်
နေ့လည်စာ - မည်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် (၂၀၀ ဂရမ်)၊ ကြက်ပြုတ်အချို့ (၈၀ ဂရမ်)
သရေစာ - ဖရဲသီးပျော့ဖတ် (၃၀၀ ဂရမ်)၊ ကွတ်ကီးများ
ညနေခင်း - ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း။